လှိုင်းကျယ် - ဝီကီပီးဒီးယား
လှိုင်းကျယ်(Broadband)ဆိုသည်မှာ ဆက်သွယ်ရေးလှိုင်းများ လွှင့်ရာ သို့ ပို၍ ကြီးမားသည့် လှိုင်းဗြက် ကို အသုံးပြုသည့် စက်၊ ဆိုလိုရင်းမှာ ပုံမှန်အသုံးပြုနေသည့် လှိုင်း သို့ စက်ပစ္စည်းများတွင် ပို၍ကျယ်ဝန်းအောင် လုပ်ခြင်းကို ဆိုလိုသည်(လှိုင်းကျယ်လျင် အသွားအလာလုပ်နိုင်သည့် အချက်အလက် ပမာဏ ပိုများလေဖြစ်)။
အခေါ်အဝေါ် "broad" သည် နေရာအများတွင် အသုံးပြုသည့် စကားလုံးဖြစ်သည်။ ရူပဗေဒမှ ဆင်းသက်လာသည့် စကားလုံးဖြစ်ပြီး၊ အသံပျံ့နှံ့ခြင်းဆိုင်ရာ နှင့် ရေဒီယို အင်ဂျီနီယာ စနစ် တို့တွင် အသုံးပြုကြသည့် wideband နှင့်လည်း ဆင်တူဖြစ်သည်။ သို့သော် ထို Broadband အခေါ်အဝေါ်သည် ၁၉၉၀ ခုနှစ်ပိုင်းများတွင် အင်တာနက် ချိတ်ဆက်မှု အမည်တစ်ခုဖြင့် ရောင်းချအသုံးပြုခြင်းများကြောင့် လူသိများလာသည်။
၂ ကွန်ပျူတာ ကွန်ယက်များတွင်
၄ အင်တာနက် ချိတ်ဆက်မှုတွင်
ရုပ်မြင်သံကြားစက်တွင် လှိုင်းကျယ်ဟု ဆိုလိုခြင်းသည် လိုင်းပေါင်းများစွာ ဖမ်းယူနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး၊ Lo-VHF အင်တာနာ အသုံးပြုသည့် ကြိမ်းနှုန်းတစ်ခု သို့ လှိုင်းကျဉ်းသည် ၁လိုင်း မှ ၅ လိုင်းအထိသာ လက်ခံနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ အမေရိကန် နိုင်ငံစံနှုန်း FS-1037C တွင် "broadband" သည်wideband၏ ကြောင်းတူသံကွဲဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်.
မိုဘိုင်းလ် လှိုင်းကျယ်(Mobile broadband)
ကြိုးမဲ့ လှိုင်းကျယ်(Wireless broadband)
အလုံးစုံ လှိုင်းကျယ် ဝန်ဆောင်မှု(Broadband universal service)
ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများ လှိုင်းကျယ်စနစ် အသုံးပြုခြင်း
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် လှိုင်းကျယ်စနစ် မြေပုံ
↑ Keith Attenborough (1988). "Review of ground effects on outdoor sound propagation from continuous broadband sources". Applied Acoustics 24 (4): 289–319. doi:10.1016/0003-682X(88)90086-2.
↑ John P. Shanidin (September 9, 1949)။ Antenna။ US Patent 2,533,900။ 1 December 2011 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 12 May 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Issued December 12, 1950.
↑ Definition: broadband။ Federal Standard 1037C, Glossary of Telecommunication Terms (1996)။ July 19, 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=လှိုင်းကျယ်&oldid=733209" မှ ရယူရန်
၇ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၂၊ ၁၉:၀၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၇ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၂၊ ၁၉:၀၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။